Ukwelashwa Kwe-Asthma Nemithi - i-GAAPP
Ikhaya>Ukwelashwa Kwesifuba Nemithi
Ukwelashwa Kwesifuba NemithiIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-07-01T12:53:24+02:00
Uma une-asthma izindiza zakho zomoya zihlala zivutha. Ulwelwesi lwemigwaqo yomoya - amashubhu okuphefumula aholela emaphashini - ayavuvukala, avuvuke futhi avale amafinyila noketshezi. Imisipha ezungeze imigwaqo yomoya ingaqina lapho okuthile kubangela izimpawu zakho. Ama-allergen ahogelwayo noma okucasulayo okufana nentuthu kagwayi kanye nokungcola komoya kusebenza njenge-sandpaper ezindaweni eziluhlaza. Uqala ukukhwehlela nokuheha njengoba ulwela ukuphefumula. Lokhu kubizwa nge-bronchospasm. Ukwelashwa kwe-Asthma okukhethekile akunakugwenywa.
Noma singeke sikwazi ukwelapha i-asthma, singayilawula. Isimo ngasinye se-asthma sihlukile, ngakho-ke wena nodokotela wakho kudingeka nenze i-asthma uhlelo lokwelashwa olwenzelwe wena nje. Kuyisifuba sakho somoya; kufanele utshele udokotela wakho ukuthi ufuna ukufeza ini. Lolu hlelo luzoba nemininingwane mayelana nezifo zakho ze-asthma nemiyalo yokuphuza imithi yakho.
Yini edingekayo ukwazi ngemithi yesifuba somoya?
Imithi ehogelwayo iya ngqo ezindizeni zomoya, usebenzisa eyodwa yezinhlobo ezintathu zamadivayisi wokuletha:
i-metered-dose inhaler (MDI): sebenzisa i-aerosol canister ecindezelwe efakwe emlonyeni weplastiki ukuletha isifutho esihle sokuhogela
i-powder eyomile inhaler (i-DPI): ukuletha umuthi njenge-powder eyomile usebenzisa i-inhaler ekhethekile; ama-DPI amaningi adinga ukuhogela ngamandla
i-nebulizer: yephula umuthi oketshezi ube yinkungu engaphefumula kancane; izinsana nojahidada kufanele ngaso sonke isikhathi basebenzise imaski nge-nebulizer yabo
Imithi yomlomo igwinywe njengoba amaphilisi, amaphilisi noma uketshezi kufinyelela ezindleleni zomoya ngokuzungeza egazini.
Imithi ekufanele ikuthembele ezintweni eziningi - iminyaka yakho, izimpawu zakho, izimbangela zesifuba somoya nokuthi yini okusebenza kangcono ukugcina i-asthma yakho ilawulwa.
Kunezinhlobo ezine eziyisisekelo zemithi yesifuba somoya:
Ama-bronchodilators akhululeke futhi avule imigwaqo yomoya ukuze akhulule ukushaywa umoya, ukukhwehlela, ukuminyaniswa nokuphefumula
Ama-anti-inflammatories anciphisa futhi avimbele ukuvuvukala kwamaphaphu - ukuvuvukala kuhlala kukhona. Ingxenye ethulile yesifuba somoya ongayiboni noma oyizwayo
Imithi ehlanganisiwe ye-bronchodilator ne-anti-inflammatory kudivayisi eyodwa
Ama-leukotriene modifiers avimba isenzo sama-leukotrienes, abalamuli ababambe iqhaza ekuphenduleni amasosha omzimba
Ama-anti-IgE monoclonal antibodies (Omalizumab) avimba amasosha omzimba e-IgE adala izimpawu zokungezwani komzimba.
I-bronchodilators esheshayo (esebenza okwesikhashana) (i-beta2-agonists) phumula futhi uvule izindlela zomoya futhi wenze kube lula ukuphefumula kungakapheli imizuzu embalwa. Ungasebenzisa futhi ama-bronchodilators asebenza ngamafuphi ukuvimbela i-bronchospasm ebangelwa ukuzivocavoca umzimba. Ama-bronchodilator wokusiza ngokushesha kufanele asetshenziselwe ukunciphisa ukuphefumula lapho kuqala uphawu lwezimpawu - lapho uwusebenzisa ngokushesha umuthi, kulapho okungenzeka ukuthi uzodinga okuncane.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zama-bronchodilator njengama-inered-dose inhalers (MDI) nama-inhalers we-powder owomile (DPI) ayatholakala.
Anticholinergics (obizwa nangokuthi abaphikisi be-muscaranic) aqede ukukhwehlela, ukukhiqizwa kwesikhwehlela, isifuba kanye nokuqina kwesifuba okuhambisana nezifo ezingalapheki zamaphaphu.
Uma udinga ukusebenzisa i-bronchodilator esheshayo ngokushesha kaningi phakathi nesonto, lokho kuyisibonakaliso sokuvuvukala okuqhubekayo; imishanguzo elwa nokuvuvukala iyadingeka.
Ama-bronchodilator asebenza isikhathi eside (ihora eli-12) phumula futhi uvule izindlela zomoya kuze kufinyelele emahoreni ayi-12. Le mithi inconywa kuphela njengokwengezwa kokwelashwa kwalabo asebevele besebenzisa imithi elwa nokuvuvukala ukwelapha i-asthma. Ungasebenzisi ngaphezu kwesisodwa njalo emahoreni ayi-12.
Theophylline iza njengethebhulethi, i-capsule, isisombululo nesiraphu. Lo muthi usiza ukuvula imigwaqo yomoya ngokuxegisa imisipha ebushelelezi.
Ukwelashwa okulwa nokuvuvukala
Ama-anti-inflammatories aphatha ukuvuvukala. Imithi elwa nokuvuvukala ivikela nemiphumela elimazayo yokuvuvukala kwomoya. Ngemuva kokusebenzisa umuthi olwa nokuvuvukala, ngeke ubone noma uzwe noma yiluphi ushintsho ngokushesha. Lokho kungenxa yokuthi kuthatha isikhathi ukuvuvukala komoya ukuthi kwehle futhi amafinyila kanye noketshezi oluningi kuphume ezindleleni zomoya. Le mithi imvamisa idinga ukuphuzwa nsuku zonke ukuvimbela izimpawu nokuhlaselwa ukuthi kungenzeki.
I-corticosteroids engenayo iyindlela yokwelashwa yesikhathi eside ephumelela kunazo zonke etholakalayo ye-asthma. Zinciphisa futhi zivimbele uketshezi olumanzi nolweqile nokuvuvukala ezindleleni zomoya. Ngoba uhogelwe, umuthi uya ngqo ezindleleni ezivuthayo zomoya. AmaCorticosteroids aseyizinga legolide ekwelashweni kwesifuba somoya. Ungadinga ukusebenzisa le mithi izinsuku ezimbalwa kuya emavikini ngaphambi kokuba ifinyelele inzuzo yayo enkulu. Ngokungafani ne-corticosteroids yomlomo, le mithi ye-corticosteroid inengozi encane kakhulu yemiphumela emibi futhi ivikelekile ukusetshenziswa isikhathi eside. Le mithi yokulawula i-asthma yesikhathi eside, evame ukuthathwa nsuku zonke, iyitshe legumbi lokwelashwa kwesifuba somoya.
Iziguli zivame ukuyeka ukusebenzisa i-corticosteroids emuncwe noma eminye imithi lapho zingenazo izimpawu futhi zizizwa kahle. Ukuvimbela izimpawu nokuhlaselwa ukuthi kungenzeki i-corticosteroid inhaler yakho kufanele ithathwe njalo nsuku zonke.
Ama-corticosteroids omlomo izosetshenziselwa ukwelapha ukuqubuka kwesifuba somoya noma i-asthma enamandla. Imvamisa zibekwa kuphela isikhathi esifushane (izinsuku ezi-5-14) ukuvikela imiphumela emibi engadingeki.
Imithi elwa nokuvuvukala engeyona eye-steroidal njengama-chromones, ama-mast cell stabilizers, asiza ekwehliseni ukuvuvukala futhi anciphise ukungezwani kwama-cell.
Ama-modifiers e-leukotriene. Le mithi elwa nokuvuvukala ngomlomo isiza ukuqeda izimpawu ze-asthma kuze kube ngamahora angama-24. Ivimbela imigwaqo yomoya ekuvuvukeni lapho ihlangana nesifo se-asthma.
Inhalers yenhlanganisela: Le mithi iqukethe i-beta agonist esebenza isikhathi eside kanye ne-corticosteroid futhi ijwayele ukunikezwa njengemithi yansuku zonke. Imithi yesikhathi eside yokulawula (i-corticosteroids) inciphisa ukuvuvukala ezindleleni zakho zomoya okuholela ezimpawu. Ama-inhaler (ama-bronchodilators) asiza ngokushesha avula imigwaqo yomoya evuvukile enciphisa ukuphefumula. Uma uyidinga yomibili le mithi, lena indlela elula yokuyihlanganisa.
Uma une-asthma flare-up, i-inhaler yokusiza ngokushesha inganciphisa izimpawu zakho khona manjalo. Kepha uma ukwelashwa kwakho okuyisisekelo kwansuku zonke kusebenza kahle, akudingeki ukuthi usebenzise i-inhaler yakho yokuphumula esheshayo kaningi. Gcina umbhalo wokuthi kukangaki ukudonsa okusebenzisa isonto ngalinye. Uma udinga ukusebenzisa i-inhaler yakho yokusiza ngokushesha kaningi kunokuba udokotela wakho ancoma, bheka udokotela wakho. Cishe udinga ukulungisa imithi yakho elwa nokuvuvukala.
Imithi yokungezwani komzimba
kungasiza uma i-asthma yakho ibangelwa noma yenziwa yimbi kakhulu ngenxa yokungezwani komzimba.
Ukudutshulwa kwe-Immunotherapy / komzimba. I-Immunotherapy inciphisa kancane kancane amasosha omzimba wakho aphendula kuma-allergen athile.
I-Anti-IgE: Omalizumab (Xolair). Le mithi, enikezwa njengomjovo njalo emavikini amabili kuya kwamane, yenzelwe abantu abanezinto ezingezwani neze-allergies kanye nesifuba somoya esibi. Ikuvimbela ekuphenduleni ezintweni ezibangela ukungezwani komzimba. Lokhu ikwenza ngokuvimba i-antibody ebanga ukungezwani komzimba.
Lokhu kwelashwa okuqondile kungasetshenziselwa i-asthma enamandla engathuthuki nge-corticosteroids noma eminye imithi yesifuba somoya yesikhathi eside. I-bronchial thermoplasty ishisa ingaphakathi le-airways emaphashini nge-electrode, inciphisa umsipha obushelelezi ngaphakathi kwezindlela zomoya. Lokhu kunciphisa ikhono lomoya womoya ukuqinisa, okwenza ukuphefumula kube lula futhi mhlawumbe kunciphise ukuhlaselwa yisifuba somoya.
Phatha ngobunzima bokulawula okungcono: Indlela yokuhamba kancane
Ukwelashwa kwakho kufanele kuguquguquke futhi kususelwe kuzinguquko ezimpawu zakho, okufanele zihlolisiswe kahle njalo lapho ubona udokotela wakho. Ngemuva kwalokho udokotela wakho angalungisa ukwelashwa kwakho ngokufanele.
Uma i-asthma yakho ilawulwa kahle, udokotela wakho angakunikeza umuthi omncane. Uma i-asthma yakho ingalawulwa kahle noma iya ngokuya iba yimbi, udokotela wakho angakhuphula imithi yakho futhi ancome ukuvakashelwa okuvamile.
Izinga lokulawulwa kwesifuba somoya
INDAWO ELUHLAZA Ukulawulwa kabi
INDAWO EPHELELE Kulawulwa kabi kakhulu
Izimpawu ezinjengokukhwehlela, ukuphefumula noma ukuphefumula okuncane Izinsuku ezimbili ngesonto noma ngaphansi Izinsuku ezingaphezu kwezimbili ngesonto Nsuku zonke nasebusuku bonke
Ukuvuka ebusuku Izikhathi ezimbili ngenyanga noma ngaphansi Isikhathi esisodwa kuya kathathu ngesonto Izikhathi ezine ngesonto noma ngaphezulu
Umphumela emisebenzini yansuku zonke None Eminye imikhawulo Kukhawulela kakhulu
Ukusetshenziswa kwe-inhaler yokusiza ngokushesha ukulawula izimpawu Izinsuku ezimbili ngesonto noma ngaphansi Izinsuku ezingaphezu kwezimbili ngesonto Izikhathi eziningana ngosuku
Ukufundwa kokuhlolwa kwamaphaphu Ngaphezulu kokungu-80% wokuqagela kwakho komuntu siqu okubikezelwe Ama-60 kuya kuma-80% wezinto zakho ezinhle ezibikezelwe Ngaphansi kwama-60% wezinto zakho ezinhle ezibikezelwe
Uhlelo lwe-Asthma Action noma lwe-Asthma Management
Cela udokotela wakho ukuthi enze uhlelo lwesenzo se-asthma oluchaza ngokubhala phansi ukuthi uzothatha nini imithi ethile noma nini ukukhuphula noma ukwehlisa umthamo wemithi yakho ngokuya ngezimpawu zakho. Faka futhi uhlu lwezimbangela zakho nezinyathelo okudingeka uzithathe ukuzigwema.
Bona futhi yonke imininingwane mayelana ukuthembela ngokweqile kuma-Blue Reliever Inhalers.